आज यस्तो छ सुनचाँदीको मूल्य काठमाडौं, २९ बैशाख । नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा केही दिनदेखि सामान्य फेरबदल हुँदै आएको छ । आज छापावाल सुन प्रतित २०७८ वैशाख २९, बुधबार,११:१८:AM
लकडाउनमा पनि सुँनचादीको मूल्य बढ्यो, आज सुँनचादीको मूल्य कतिले बढ्यो त ? काठमाडौं, २८ बैशाख । आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य ३ सय रुपैयाँले बढेको छ । सोमबार ९२ हजार रुपैयाँ प्रतितोला कारो २०७८ वैशाख २८, मङ्गलबार,०२:२६:PM
सोमबार सुनचाँदीको मूल्य कति ? काठमाडौंं, २७ बैशाख । आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य २ सय रुपैयाँले बढेको छ । आइतबार प्रतितोला ९१ हजार ८ सय रुपैयाँमा का २०७८ वैशाख २७, साेमबार,११:३३:AM
आज सुनको मूल्य १ सयले बढ्यो काठमाडौं, २६ बैशाख । केही दिन यता नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढिरहेको छ । आज सामान्य अंकले सुनको मूल्य बढेको हो । २०७८ वैशाख २६, आइतबार ,११:२८:AM
आज सुनको मूल्य घट्यो, प्रतितोला कतिमा कारोबार ? २०७८ वैशाख १५, बुधबार,११:४१:AM
आज सुनको मूल्य कतिले घट्यो ? काठमाडौँ, १४ बैशाख । सोमबार ९१ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य मङ्गलवार घटेको छ । आज सुन प्रतितोला १ सय र २०७८ वैशाख १४, मङ्गलबार,१२:४९:PM
निरन्तर ओरालो लागेको सुनको मूल्य आज वृद्धि काठमाडौं, ४ फागुन । नेपाली बजारमा केही दिन यता निरन्तर सुनको मूल्यम गिरावट आएको थियो । आज भने सुनको मूल्य प्रतितोला २ २०७७ फागुन ४, मङ्गलबार,०६:३८:PM
आज सुनको भाउ घट्यो काठमाण्डौ , माघ १४ । आज बुधबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ ७ सय रुपैयाले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाए अनुसार&nbs २०७७ माघ १४, बुधबार,११:२६:AM
आइतबार सुनको बजार मूल्य प्रतितोला ९१ हजार ८ सय, चाँदी पनि घट्यो काठमाडौं, माघ ४। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले निर्धारण गरे अनुसार आज आईतवार सुन प्रतितोला ७ सय रुपैयाँले घटेको छ। आज छापावाल सु २०७७ माघ ४, आइतबार ,०३:२९:PM
सुन तोलामा ३ सय ले बढ्यो मङ्सिर ०७, काठमाण्डौ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका २०७७ मङ्सिर ७, आइतबार ,०१:०७:PM